Sheekada filimka Mohalla Assi: Sunny Deol waji cusub ayuu la yimid balse filim wanaagsan kuma dhicin – Filimside.net
Sheekada filimka Mohalla Assi: Sunny Deol waji cusub ayuu la yimid balse filim wanaagsan kuma dhicin
November 17, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 17, 2018
Mohalla Assi waa filim 7-sano ka hor shaqadiisa soo bilaabatay sidoo kalena marar kala duwan la diiday tiyaatarada la saaro ayadoo lagu eedeeyay in diinta Hinduuga meel kaga dhacaayo fariintiisa waxaa u xigtay sedex sano ka hor in filimkan la xaday oo si Online ah Internet-ka loogu soo fasaxay.
Dhibaato badan kadib kooxda filimka Mohalla Assi maxkamada sare Hindiya ayaa siisay warqad lagu daawan karo mashruucan oo la siiyay shahaado A Certificate ah ama dadka qaan gaarka inay daawan karaan haatana tiyaatarada ayaa la saaray ayadoon cidna ka war heynin ama xayeysiin balaaran loo sameynin xitaa Sunny Deol oo hogaamiye ka ah mashruucaan kama uusan hadlin ama xayeysiin uma sameyn madaama uu yahay filim mudo meel iska yaalay.
Jilaayaasha Filimkan: Sunny Deol, Sakshi Tanwar, Ravi Kishan, Saurabh Shukla, Mukesh Tiwari & Bose DK
Fariinta Filimka Mohalla Assi Oo Kooban: Fariinta filimkan waxay ku saabsan yahay magaalada Varanasi oo loo dalxiis tago sidoo kalena Hinduuga waajibaadka diiniga ah ku gutaan in dadka dalxiisayaasha ah lacag been ah ka cunaan shaqsiyaad iska dhigayaan wadaado Hinduu ah oo diinta Hinduuga ganacsi ka sameeyaan iyo wadaad Hinduu daacad ah oo istaagayo inuu sharafka diintiisa iyo dalkiisa difaaco.
Dharmnath Pandey (Sunny Deol) waa wadaad Hinduu ah kaasi oo dhaqankiisa ku dhagan sidoo kalena dadka mandarka wax ku baro halka xaaskiisa Savitri (Sakshi Tanwar) labada caruur u heyso ay dhib badan tahay kuna nacday inuusan hormar rabin oo uu kaliya mandarka iyo arimaha la xariiro ka fikiro.
Waxaa jiro nin xariif ah Kanni Guru (Ravi Kishan) kaasi oo dal xiisayaasha lacag ka qaato kuna soo wareejiyo goobaha Hinduuga wax ku caabudaan sidoo kalena been dadka ku qaldo, kadibna arimahan siyaasiyiin ayaa xitaa ku lug yeelanayaan in dumarka dalxiisayaasha ah la qayaano iyo tacadiyo kale.
Ugu dambeyntii Dharmnath Pandey (Sunny Deol) wuxuu u istaagaa sidii uu sharafka deegaankiisa iyo diinta Hinduuga kuwa ka ganacsadaan uga hortagi lahaa asigoo dad badan garab ka helaayo laakiin nafsadiisa iyo mida reerkiisa ayaa halis soo wajaheyso.
Haddaba Dharmnath Pandey (Sunny Deol) aan rabin dagaal dhiig ku daato inuu galo siduu uu sharafka deegaankiisa ku difaacaa ugana hor tagaa dalxiisayaasha la dhiig miirto oo diinta Hinduuga loogu soo hoos gambado.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Mohalla Assi sheeko ahaan wuxuu ku saleesan yahay buuga caanka ah ‘Kashi Ka Assi’ balse nuxur badan looma yeelin oo lama tayeenin waxaana ka muuqato fariintan in si dabacsan la isugu daba riday. Director Dr. Chandraprakash Dwived fariinta si sahlan ayuu u dhigan mararka qaar xiiso ayay leedahay balse filimkan waxaa ku badan aflagaadada iyo asigoo qaybihiisa dambe sheeko ahaan liito midaas ayaana nuxurka ka qaadeyso.
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha: Sunny Deol wuxuu la yimid waji aan horey looga baranin door dagan oo uu xal wax ku raadinayo Mohalla Assi waa mid ka mid ah aflaantiisa uu ugu bandhiga wanaagsan yahay Sunny Deol gacan ma qaadayo balse hadaladiisa dabacsan iyo wajigiisa qiirada uu xambaarsan yahay ayaa u dhiganto inuu la yimid bandhig mudan in abaal marin lagu siiyo inkastoo filimkan.
Sakshi Tanwar door adag ayay qaadatay oo ay ku mataleyso qof xanaaq badan sidoo kalena saameyn wacan ayay filimkan ku leedahay. Ravi Kishan waa midka kaliya ee filimkan mada daalo dhameestiran la imaaday dadka shactiro galinaayo wuxuuna leeyahay boos xiiso badan.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Mohalla Assi: Bandhiga Sunny Deol, iyo kartida Sakshi Tanwar iyo fariintiisa oo mid xasaasi ah laakiin aan loo dhigin hab adag oo qof walbo soo jiidan karto.
Muxuu Ku Liitaa Mohalla Assi: Waa filim diideem aflagaado iyo jiho toos ah aan laheyn sidoo kalena malahan mada daalo dhameestiran mana daawan karaan qoysaska.
Qiimeynta Fariinta Filimka Mohalla Assi: 2/5 (Labo Xidig)
Gunaanad: Mohalla Assi waa isku day fariin ahaan liito una dheer tahay inuusan wax hadal heyn ah xambaarsaneyn sidoo kalena mudo dheer meel iska yiilay arimahaas waxay sababi doonaan in ganacsi aan laga warqabin uu Boxoffice-ka ka sameeyo kadibna si dhaqsi ah uu tiyaatarada kaga dago!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Mohalla Assi kaasi oo mudo dheer kadib tiyaatarada la saaray:
Waxaa Aqrisay 714